हाउस वार्मिंग पार्टी
गोविन्द गिरी प्रेरणा, (मनासस, भर्जिनिया, अमेरिका )
परिवेश हातमा रहेको कपको सेलाइसकेको कफीको चुस्की लिंदै विगतमा हराउन थाल्यो ।<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
मान्छेलाई समयले कहाँवाट कहाँ पुर्याउँदो रहेछ । कहाँ कहाँ भोजपुरको याकु गाउँमा जन्मेर, त्यहीं स्कूले शिक्षा सकेपछि उनका वा आमा विराटनगर वसाईं सरेका थिए । विराटनगरवाट विएसम्मको शिक्षा ग्रहण गरेपछि फराकिलो शहर र अग्लो उद्देश्य लिएर उ काठमाडौं हान्निएको थियो । काठमाडौंमा उसले शुरुमा त निकै हण्डर खानु परेको थियो ।
पहिलो कुरा त अविवाहित भएकाले डेरा पाउन उसलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । एक्लो केटाले त डेरा पाउनै मुस्किल । कति ठाउँमा त विहा गरेको छु , गाउँमा स्वास्नी छे भनेर ढाँट कुरा पनि गरेको हो । तर त्यो ढाँट कुरा पनि काम लागेको थिएन र विराटनगरकै एकजना परिचितको घरमा शरण लिन पुगेको थियो ।
त्यहाँ एकाध महिना वसेपछि उसले कसरी त्यहाँवाट उम्किने, त्यो दाउ खोज्ने अभियान छेड्नु पर्यो । कारण सरल थियो, ती आफन्तको जागिर एयरपोर्ट भन्सारमा थियो र रातदिन नोटको विटा ल्याउने र होटलमा वास वस्ने वानी भएको थियो । यौटा नोटको विटो स्वास्नीको हातमा सुम्पेपछि उसले त्यस वापत एकाध दिन घरमा वास वस्न नआए पनि गुनासो हुन्नथ्यो । पछिपछि त घरमा भन्दा घर वाहिर वास वढी हुन थालेको वेलाको परिवेशमा उ त्यो घरमा शरण लिन पुगेको थियो ।
चिवेचरीको झैं चिरविरे स्वरकी म्याडमको उदासीलाई साम्य पार्न परिवेशले भन्यो, त्यत्रो कमाई गर्ने सरलाई किन दुखी वनाउनु हुन्छ ?
म्याडमले त्यसपछि उसको हात समातेर सोधेकी थिइन्, "अनि मभित्र उग्र भइरहेको आगो कसले शान्त पार्छ नि ?"
म्याडमको यो जवाफले उ अवाक् भएको थियो ।
त्यसपछि एक्कासी म्याडमले उसको कठालो समातेर आफ्नो कोठामा लगेर सोधेकी थिइन्, तिमी सक्छौ मलाई शान्त पार्न ?
उ चूपचाप थियो यो अचानक विकास भएको अप्रत्यासित घटनाक्रमले र उसको ओठ वोल्न नसकेर थर्थराएका थिए ।
त्यसपछि म्याडमले उसलाई चिथोर्न, कोपर्न थालेकी थिइन् र एकाएक रुन थालेकी थिइन् । म्याडमको आँसुले उ द्रवित भएर उसले हत्केलाले सुस्तरी आँसु पुछिदिएको थियो । म्याडमले उसले आँसु पुछेका दुवै हात च्याप्प समातेकी थिइन् र उसलाई अँगालोमा वाँधेकी थिइन् ।
यतिन्जेल नफूटेको उसको धैर्यको वाँध अव फूटेको थियो ।
केहीवेरपछि म्याडमको आगो साम्य भएको थियो र परिवेशको छातीमा भने डरलाग्दो डडेलो सल्केको थियो ।
यसैवीच हो उसले त्यो घर छाडेर अन्त जान खोजेको ।
तर म्याडमले वाचा वन्धनमा पारेर उसलाई त्यहीं वस्न वाध्य तुल्याएकी थिइन् । उ वाध्यतावस वस्नु परेको थियो ।
पछिपछि त उसलाई दुनियाँमा म्याडमभन्दा कोही नभए हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको थियो । राजकुमार भण्डारी, म्याडमका पति घरमा वास वस्न आएको दिन उसलाई नमज्जा लाग्न थालेको थियो ।
अचानक एकदिन राती घर आइपुग्दा राजकुमार दम्पत्ती मारामार झगडा गरिरहेका थिए । लोग्ने निकै पिएर आएको वुझिन्थ्यो, उ लर्वरिएको आवाजमा भन्दै थियो, मलाई नामर्द ठानेकी राँड तैंले ? नाठो खेलाएर रमाएकी , तेरो म रगत पिउँछु, इत्यादि ।
माथि कोठामा उनीहरु उसकै विषयमा झगडा गरिरहेका थिए भने अव उसले त्यहाँ वास वस्न उचित ठानेन र सँगैको घरमा वस्ने, हालसालै चिनेको साथीकहाँ उ पुगेको थियो ।
केही दिन अघि चिनापर्ची भएको, एक दुई पल्ट सँगै चिया पिएको र एकाध पल्ट आउजाउ गरिसकेको हुनाले उसलाई त्यहाँ जान कुनै अप्ठ्यारो लागेन र भन्यो, आज म यतै वस्न चाहन्छु । हुन्छ ?
त्यो साथीले भनेको थियो, एकदम स्वागत छ तपाईंलाई ।
यसो अलिकति पिउँदै गफगाफ गर्न मन लागेर हो...उसले भनेको थियो ।
त्यसपछि दुवै वाहिर निस्केका थिए र हाफ वोतल ह्विस्की , सोडा , दालमोठ र ड्राई मिट किनेर फर्केका थिए ।
त्यो मित्र अर्थात् रितुवर्ण थपलियासँगको त्यो साँझको वसाई अनि अवेरसँग वस्दै पिएर गफ गरेको रातले उसको जीवनमा नयाँ मोड ल्याई दिएको थियो ।
"होइन कफीमै अल्झने हो कि पार्टीमा जान तयार हुने हो हजुर ?" विन्द्यवासिनीको वोलीले परिवेश झस्कियो । उ विस्मृतिको काठमाडौंवाट एक्कासी अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यको फल्सचर्चमा आइपुग्यो ।
मलाई त पार्टीमा जान पटक्क जाँगर चलेको छैन, वासिनी । उसले विन्द्यवासिनीलाई भन्यो ।
उ माया गरेर स्वास्नीलाई वासिनी भन्न मन गथ्र्यो । उ पनि त्यसो भन्दा मख्ख पर्थी ।
वासिनीले उसको गाला मुसार्दै भनी, "ल छिटो तयार हुनोस् म मेकअप सकिहाल्छु ।" यति भनेर वासिनी मेकअपका लागि अर्को कोठातिर लागी र उ पुनः एक्लो भयो ।
वास्तवमा उसलाई म्याडमको पंजावाट छुटकारा दिलाएर अमेरिका ल्याउने वासिनी नै थिई, यद्यपि आज पर्यन्त वासिनी यो तथ्यवाट वेखवर छे ।
राती अवेरसम्म रितुवर्ण र परिवेश त्यो हाफ वोतल ह्विस्की सिध्याउन नसकेर आकास पातालको गफ गर्दै समय कटनी गरिरहेका थिए ।
झण्डै मध्यरातमा रितुले भनेको थियो, "यार एकछिन वाहिर हावा खाएर आउँ, सारै औडाहा भयो ।"
वास्तवमा खडेरी परेको जेठको महिना थियो त्यो । परिवेश रितुको प्रस्ताव सकार्दै वाहिर जान जुरुक्क उठेको थियो । अनि दुवै हल्लदै यताउता टहलिईरहेका थिए ।
"वास्तवमा समयको खेललाई मान्नुपर्छ, म तपाईंलाई यौटा कुरा भन्न चाहन्थें, तपाईंलाई मेरो कोठामा निम्त्याउन चाहन्थें । तर तपाईं आफै मेरो कोठामा आएर ठूलो संकट टारिदिनुभयो ।" रितुले भन्यो । परिवेश क्यै कुरा नवुझेर छक्क परेको थियो ।
"वास्तवमा तपाईं भनेपछि हुरुक्क हुने यौटी कन्या छिन् ।" रितुवर्णले यसरी कुराको उठान गरेको थियो ।
"को होली त्यो अभागिनी ।" परिवेशले हाँस्दै भनेको थियो । यसो भन्न उसले पिएको ह्विस्कीको पनि अलिकति योगदान हुँदो हो ।
"जो भए पनि राम्री कन्या हो । सुशिल कन्या हो । तपाईं भनेपछि हुरुक्क हुने कन्या हो ।" रितुले भनेको थियो । परिवेश रितुको कुराले आश्चर्यको भूमरीमा परेको अनुभूत गर्दै थियो ।
"त्यो कन्याको प्रस्ताव स्वीकार्ने हो भने तपाईको जीवनले नयाँ आयाम पाउँछ ।" उसले भनेको थियो ।
'यो त कुन ठूलो कुरा भयो र । उसको छातीमा यो जवाफ उम्रेको थियो ।' तर ओठमा आइसकेको थिएन ।
"त्यो कन्यालाई स्वीकार्नु भनेको अमेरिका जाने भिषा लाग्नु हो ।" रितुले सुस्तरी भनेको थियो ।
"कसरी ?" परिवेशले सोधेको थियो ।
कसरी भने त्यस कन्यालाई डिभी परेको छ र छिट्टै उसले लोग्नेको नाम फाराममा भर्न पाई भने सिधै अमेरिका ग्रिनकार्डसहित । परिवेशको कानमा यी शव्द परेको थियो ।
अघिसम्म त परिवेश ठट्टाको मूडमा थियो र सवथोक हल्का रुपमा लिई रहेको थियो, तर यो कुराले भने उसले पिएको ह्विस्कीको नशा स्वात्तै वेपत्ता पारिदिएको थियो । तपाईंको कुरा म भोली दिउँसो उनीकहाँ पुर्याउन सक्छु । रितुले भनेको थियो । परिवेश अक्क न वक्क भएको थियो ।
अव सुत्न जाउँ, रितुले भनेको थियो ।
तर के सुत्नु नि, रितुको कुराले परिवेशको निद्रा वेपत्ता भएको थियो । रातभर निद्राको ठाउँ छटपटीले लिएको थियो । परिवेशको निद्रा वेपत्ता पार्ने त्यो कन्या अरु कोही नभई विन्द्यवासिनी थिई ।
परिवेश आफ्नो कफीको कपमा फर्कियो ।
अमेरिकाको आगमन परिवेशका लागि सुखद आश्चर्य थियो । नसोचेको भूमरिवाट नसोचेको संसारमा उसले पदार्पण गरेको थियो ।
अमेरिका त उसले सपनामा पनि सोचेको थिएन, कहिल्यै आउँला भनेर ।
रितुले भोलिपल्ट विन्द्यवासिनीसँग भेटाएको थियो अनि पहिलो भेटमै दुवैले एकअर्कालाई मन पराएका थिए ।
विन्द्यवासिनीले अन्तिम वाक्य यसो भनेकी थिई, "भोलि अमेरिका गएर दुःख पाएँ भनेर मलाई दोष दिन पाउनुहुन्न नि ।"
उसलाई लागेथ्यो, अमेरिका मन नपरेर गाली गर्ने को मूर्ख होला । त्यस्तो हुँदैन । उसले यत्ति मात्र भनेको थियो प्रकटमा ।
वास्तवमा विन्द्यवासिनीलाई डिभी चिट्ठा परेको रहेछ र उपयुक्त पात्रको खोजिमा रहिछ ।
गाउँवाट आएको पढाकु, सज्जन भन्ने कसैले वताएपछि उ आफैंले टाढैवाट परख र पारख गरेकी रहिछ ।
उसले परिवेशको सामान्य पृष्ठभूमि थाहा पाएकीले मन पराउन सजिलो भयो भने म्याडमको चक्रवाट छुटकारा पाएर अमेरिका पुग्न पाउनुले परिवेशलाई सकारात्मक निर्णय गर्न सहयोग पुगेको थियो ।
अमेरिका आउने वित्तिकै परिवेशले यौटा फाष्ट फूडमा काम पाएको थियो र एकै वर्षमा असिष्टेण्ट म्यानेजर हुने मौका पाएको थियो । वासिनीले पनि नेल्समा काम पाएकी थिई ।
हो यसैवीच रितेश शर्मासँग परिवेशको परिचय भएको थियो । दशवटा काम गरेर अमेरिका पचाइसकेको रितेश अहिले घर जग्गा किनवेच गर्ने रियाल्टर भएको थियो । अनि दुईचार दिन विराएर उ एपार्टमेण्टमा आएर गफ लाउँथ्यो र भन्थ्यो, हैन तपाईहरु घर किन्ने होइन ? हेर्नोस, अहिले मौकामा घर किन्नु भो भने एक वर्षमै पचासौं हज्जार नाफा हुन्छ ।
केही पल्ट त परिवेश र वासिनी दुवैले वास्ता गरेनन् ।
एकदिन चाहीं परिवेशले झर्के झैं गरेर भन्यो, हैन रितेशजी तपाईंले ठट्टा गर्नु भएको हो कि के हो मैले त कुरै वुझिंन । एपार्टमेण्टको भाडा तिर्न धौधौ छ, घर किन्ने कुरा गर्नु हुन्छ ।
लौ त्यही भएर त घर किन्नोस् भनेको नि । तपाईंले एपार्टमेण्टलाई तिरेको भाडा महिनैपिच्छे भूस हुन्छ । तर घर किन्नु भो भने तपाईले तिरेको घरको किस्ताको केही अंश वचत हुन्छ । दिन दुगुना भने झैं घरको भाउ वढेको वढ्यै छ, वढेको रकम सोझै नाफा । अनि के चाहियो ।
तर रितेशको कुरा उसलाई अझै पत्यार लागेको थिएन । किन भने घर किन्न उसँग पैसा थिएन ।
अनि कुन पैसाले किन्नु नि घर ? परिवेशले भनेको थियो ।
हेर्नोस , पैसा चाहिंदै चाहिन्न । यसो ५।७ हजार भए भैहल्छ । रितेशले भनेको थियो ।
वासिनी त्यसो भए आँट्ने हो त घर ? उसले सोधेको थियो ।
यति सजिलै घर पाइन्छ भने त किन नकिन्नु नि । मैले अलिकति जम्मा पारेकी छु , तपाईं पनि अलिकति खोज्नोस्, अमेरिकामा घर मालिक हुन पाईने अवसर किन गुमाउने ? वासिनीले भनेकी थिई । त्यसपछि घर हेर्ने सिलसिला चलेको थियो ।
घर तीन लाख असी हजार डलरमा पाइएको थियो ।
परिवेशको त झण्डै सातो गएको थियो मोल सुनेर । वाफरे झण्डै चार लाख । भन्नाले अढाई करोड नेपाली ।
परिवेश चूप लागेको देखेर रितेशले भनेको थियो, दाई मोल देखेर तर्सिनु भा,को ? हेर्नाेस् न, ६ महिनामा यो घरको मोल साँढे चार लाख पुग्छ, अनि त तपाईंलाई ६०।७० हजार डलर नाफा ।
परिवेश फेरि हिसाव गुन्न थालेको थियो ६० हजार डलर अर्थात् ४० लाख भन्दा वढी ।
रितेषले फेरि भनेको थियो, वजार मूल्य त्यस घरको अहिले तीन लाख पन्चानव्वे हजार छ । अहिलेनै १५ हजार डलर त इक्विटी छ ।
परिवेशले सोधेको थियो, के हो इक्विटी भनेको ?
यसलाई नाफा सम्झनोस् । परिवेशले मुस्कुराउँदै भनेको थियो ।
वाफरे किन्दैखेरि १५ हजार डलर नाफा । परिवेश दंग परेको थियो ।
ल घर मन परेको भए आँट्नु होस्, रेल स्टेशनको नजिक यति मजाको घर १५ हजार इक्विटी सहित पाउनु भाग्यै हो । राम्रै भाग्य रहेछ तपाईंहरुको । अलिक टेढो तरिकाले मुख वँग्याउँदै रितेशले भनेको थियो र विदा हुँदै उसले भनेको थियो, हिरा पाइएको छ क्यारे, लिन मिल्ने नमिल्ने तपाईंहरुको सोचमा भर पर्छ । म भोलि आउँला घर सल्लाह गर्नु होला ।
रितेश गएपछि वासिनी र परिवेश अवेरसम्म घर किन्ने विषयमा छलफल गर्दै अल्झिएका थिए । साँच्चै यति सजिलोसँग अमेरिकामा घर पाइन्छ भने के चाहियो ?
हैन घर किन्दै १५ हजार डलर नाफा रे, विचित्रै होइन त यो ? परिवेशले भनेको थियो ।
भाग्यमा भएपछि यस्तै हो । चिट्ठा परेर अमेरिका आउन पाइयो , भाग्यले । यस्तो घर पाइने भो, भाग्यले । वासिनीले भनी ।
यस्ती मायालु वासिनी पाएँ , भाग्यले । परिवेशले भन्यो र वासिनीलाई च्वाप्प गालामा म्याँईं खायो ।
अर्को दिन रितेश आउँदा उनीहरु घर किन्नका लागि तयार भैसकेका थिए ।
रितेशले घर मूल्याँकन, घर निरिक्षण , घरको लागि ऋण सवका लागि दौडधूप गरेको थियो । उनीहरुको आम्दानीले ऋणका लागि अपुग भयो । रितेशले नै यौटा कम्पनीमा पार्ट टाइम काम गरेको देखाएर त्यो समस्याको समाधान गरिदियो ।
वासिनी र परिवेश दंग थिए, सारा कुरामा रितेशले सहयोग पुर्याएको थियो । उनीहरु भन्थे, यो रितेशले त देवदूतको रुपमा हामीलाई सहयोग पुर्याउन गोलोकवाट आएको हो ।
विहानको चियादेखि रातीको खाना पनि रितेशले उनीहरुकहाँ नै खान्थ्यो, अविवाहित थियो, मनमौजी थियो ।
घर पास गर्नेदिनसम्म रितेश परिवेश वा वासिनीलाई कतै जान परे आफ्नै कारमा पुर्याउने ल्याउने गरिदिन्थ्यो । रितेशको सहयोगले उनीहरु कृतकृत्य भएका थिए । घर पास भयो । अव उनीहरुको हातमा अमेरिकाको घरको साँचो थियो ।
परिवेश र वासिनीले घर किनेको कुराले साथीभाईहरुमा चर्चा भएपछि सवले भने, हाउस वार्मिंग पार्टी नगरेसम्म हामी तिमीले घर किनेकौ पत्याउन्नौं ।
"अमेरिकामा यसरी आफ्नो घर भएपछि यो पार्टी भन्ने के ठूलो कुरा हो र ।" परिवेशले भन्यो । "पार्टी त गर्नैपर्छ ।" वासिनीले पनि भनी ।
दुवैको सल्लाह मिलेपछि उनीहरुले चिने जानेका सवैलाई वोलाएर हाउस वार्मिंग पार्टी गरेका थिए ।
पार्टीको दिन परिवेशको भुईंमा खुट्टा थिएन र अलि धाक धक्कू उसको ओठवाट झर्न थालेको थियो ।
डेरा भनेको डेरा हो । घर भनेको घरै हो । आफ्नो घरमा उफ्रिनुको आनन्द वेग्लै हुन्छ । उ भन्दै थियो ।
हैन यो घर कति वर्ष पुरानो हो ? कसैले सोधेको थियो ।
हुन त यो घर ३५ वर्ष पुरानो हो । तर घरको सवथोक नयाँ छ । हिटिंग सिस्टम चाहीं घर वनेदेखिकै रहेछ, एकदम मजवूत । वास्तवमा अमेरिकामा घर कहिल्यै पुरानो हुँदैन । उसले हौसिएर जवाफ दिएको थियो ।
अनि मोरगेज कति पर्छ नि ? कसैले सोधेको थियो ।
हाम्रो कमाइले मज्जाले पुग्छ । अझ यौटा वेडरुम भाडामा लाउने हो भने त उत्तम हुन्छ । उसले जवाफ दिएको थियो ।
वास्तवमा उसले यो जवाफ दिनुको खास कारण थियो । रितेशले यौटा पत्रिकाको अफिस राख्न यौटा कोठा भाडामा लगाइदिने वचन दिएको थियो ।
पार्टीमा पेयले रौनक वढाएको थियो । हातहातका गिलास स्वत स्फूर्त छचल्किन थालेपछि परिवेश झन् छचल्किन थालेको थियो । घर भनेको घरै हो, एपार्टमेण्ट भनेको एपार्टमेण्ट नै हो भनेर दुइचार चोटी दोहोर्याउन थालेपछि एकाध निम्तालुहरुले मुख कुच्याउन थालेका थिए र वासिनीले पाखुरामा समातेर एउटा कुनामा लगेकी थिई र मायालु प्रकारले हपारेकी थिई, हजुरलाई रक्सी लाग्यो कि क्याहो, एउटै कुरा कति दोहोर्याउनु भएको । सवैले नराम्रो मानेका छन् । रेष्टरुममा गएर यसो फ्रेस भएर आउनु होस्, अनि डिनर शुरु गर्ने ।
वासिनीले यसो भनेपछि परिवेश आज्ञाकारी छात्र झैं चूपचाप रेष्टरुममा गएर ताजा भएर फर्केको थियो ।
त्यसपछि उसले सवैलाई सम्वोधन गर्दै भनेको थियो, मित्रहरु यहाँहरुले पाउ कष्ट गरेर आइदिनु भयो, यो घरको शोभा वढाइदिनु भयो, हामी यसका लागि विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिन्छौं । अव डिनर तयार भएको छ, अव डिनर पनि शुरु गर्नुभए हुन्छ । ढिलो हुँदैन भने डिनर पछि नाचगान पनि गर्ने हो ।
केही निम्तालुहरु भोलि विहानै काममा जानु छ भनेर खाना खान थाले । कोही भोली १२ वजे काममा जाने हो, आनन्दै छ भन्दै गिलास सुम्सुम्याउन व्यस्त थिए ।
एक जनाले सोधे, हैन रितेशजी त देखिनु भएन नि !
अँ अलि ढिलो हुन्छ भनेका थिए आउँछन् । वासिनीले भनेकी थिई ।
अव रितेशको दर्शन पाउन मुस्किलै पर्ला । घर पास भएपछि अव उसलाई भेट्न हम्मेहम्मे पर्छ । उसलाई चाहियो भने दिनमा १० पल्ट पनि फोन गर्छ, भेट्नै आउँछ, हामीलाई चाहियो भने १० महिना पनि फोन उठाउँदैन । कसैले जवाफमा भनेको थियो ।
त्यति असल रितेशको वारेमा गरेको टिप्पणीले वासिनीलाई कताकता नमिठो लाग्यो । तर प्रत्यक्षमा क्यै भनिन ।
पार्टी राती अवेरसम्म चलेको थियो र अन्तमा नाचगानसमेत गरेर टुङ्गिएको थियो ।
घर सरेपछि उनीहरुले पहिलो किस्ता डेड महिनामा तिरेका थिए । त्यसपछि हरेक महिना किस्ता, विजुलीको वील, तीन महिनामा होम ओनर्स एसोसिएसनको दस्तुर, पानीको वील आउन थालेको थियो । सवै रकमको जोड र उनीहरुको कमाइको जोडवीच कम अन्तर देखा पर्न थालेको थियो र परिवेशले पार्ट टाइम काम थालेको थियो । वासिनीले पनि अतिरिक्त काम थालेकी थिई ।
रितेशलाई जति फोन गरे पनि उठ्न छाडेको थियो र भ्वाइस मेसेज छोड्दा पनि जवाफ आउँदैनथ्यो ।
केही महिनापछि घरको कर तिर्नु पर्ने चिट्ठी आयो । केही दिनमा घरको विमा नविकरणका लागि चिट्ठी आयो । र त्यसभन्दा डरलाग्दो कुरा उनीहरुको घरको मजवूत हिटिंग सिस्टमको मेसिन वन्द भयो र मर्मतका लागि कुरा बुझ्दा मेसिन पुरानो भएकाले फेर्नुपर्ने र त्यसका लागि पाँच हजार डलर लाग्ने देखियो ।
घर मालिक हुन पाउनुको आनन्द र रमाइलो तीन महिनामै धूलधूसरित भएको थियो र मरिमरि काममा गएर आएपछि परिवेश र वासिनी एकअर्काको मुख हेर्ने मात्र भएका थिए । उनीहरुको वोली अर्थतन्त्रले निभाईदिएको थियो ।
केही समय त उनीहरु रितेशले परेको वेला सहयोग गर्छ भन्नेमा ढुक्क थिए । अव त्यो ढुक्कको तिर उल्टोतिर पुगेको थियो । तर हाउस वार्मिंग पार्टीमा राती अवेरसम्म पनि रितेशले फोन उठाएको थिएन र सवै निम्तालुहरु गैसकेपछि पो उसको फोन आएको थियो । न्यूयोर्क गएको गाडी विग्रेर आउन नसकेको उसको भनाई थियो ।
जवाफमा परिवेशले लौ त भरे भोली भेटौंला भनेको थियो , जुन भरे भोली कहिल्यै आएन । अफिसका लागि कोठा भाडामा लगाउने कुरो पनि गर्भमै तुहिएको थियो ।
अव के गर्ने ? परिवेशको मनले सोध्थ्यो । अव के गर्ने ? वासिनीको मनले सोध्थ्यो ।
तर प्रत्यक्षमा सोध्ने आँट गर्न सकेका थिएनन् ।
एकदिन दुवैले एकसाथ छुट्टी पाएका थिए । यो जुराइदिने अरु कोही नभएर डरलाग्दो हिमपात थियो । अघिल्लो दिन देखि भएको हिमपातले वाटो घाटो सारा वन्द भएको थियो । सारा दोकान, व्यापारिक प्रतिष्ठान वन्द भएका थिए । यो वन्दकै कारण उनीहरुले स्वत छुट्टी पाएका थिए ।
"हामीले यसरी सुत्न नपाएको पनि कति धेरै भएछ हगी ?" वासिनीले भनी ।
"हो त नि हगी ?" परिवेशले भन्यो ।
"हामीले ढुक्कले प्रेम नगरेको पनि कति भैसक्यो हगी ?" परिवेशले वासिनीको कपाल मुसार्दै भन्यो ।
"त्यही त भन्या ।" वासिनीले परिवेशको छातीमा मुण्टो गाड्दै भनी ।
वाहिर हिउँ अविराम परिरहेको थियो तर उनीहरु भने पसीनाले लफ्रक्कै भिजेका थिए । प्रेमको मौसम जो उदाएको थियो ।
निकै वेर उनीहरु अँगालोमा गुजुल्टिरहे मानौं उनीहरुको विहा भर्खरै भएको हो, पिरतीको उदात्तता भर्खरै आरम्भ भएको हो । "वासिनी यौटा कुरा भनौं ?" परिवेशले सोध्यो ।
"भन्नुस न ।" वासिनीले भनी ।
"हाम्रो प्रेममा तगारो, हाम्रो सुखको तगारो, शान्तिको तगारो यो घर घाँडो भो हगी ?" परिवेशले भन्यो ।
"मैले पेटमा भएर पनि मुखले भन्न नसक्या कुरा यही त हो नि ।" वासिनीले भनी ।
"कतिले घर छाड्दा रहेछन्, हामी पनि छाडौं न, के भो त ?" वासिनीले भनी ।
"लाज हुन्न ?" परिवेशले भन्यो ।
"कति अमेरिकन, इण्डियन, पाकिस्तानी, वंगाली, स्प्यानिस लाई लाज नहुने, हामी नेपालीलाई लाज हुने ? लाजले पैसाको संकट टार्ने होइन क्यारे ।" वासिनीले भनेकी थिई ।
त्यसपछि घर फोर क्लोजरमा गएको थियो र उनीहरु पुन एपार्टमेण्टवासी भएका थिए ।
लौ अझै के गम खाएर वस्नु भा, भन्दै वासिनी परिवेश सामु झुल्किई । ल म तयार भैहालें भनेर उ रेष्टरुमभित्र छिर्यो र केहीवेरमै फ्रेस भएर निस्कियो अनि कपडा वदल्न थाल्यो । दुवै तयार भएर निस्कदा साँझले आफ्नो अनुहार देखाइसकेको थियो । "मै चलाउँछु कार, भरे फर्कदा मैले नै चलाउनु पर्ने हो क्यारे ।" वासिनीले भनी ।
"लौ तिम्रै इच्छा ।" परिवेशले जवाफमा भन्यो ।
"तर गाडी चलाउन पर्दैन भनेर धेरै पिउने होइन नि राजा" वासिनीले हाँस्दै भनी ।
"हुन्छ ।" परिवेशले यत्ति भन्यो ।
"कुरा पनि कम गर्ने है ।" वासिनीले फेरि भनी ।
"म वोल्दै वोल्दिन ।" परिवेशले भन्यो ।
"नवोले त लाटो भन्छन् नि प्यारा ।" वासिनीले भनी ।
"त्यसो भए अलिअलि वोलौंला ।" परिवेशले भन्यो ।
यतिन्जेल उनीहरु कारमा वसि सकेका थिए र वासिनीले टोयोटा कोरोलाको २००० मोडेलको कार मज्जाले हुईंक्याइसकेकी थिई । उनीहरु पुग्दा पार्टी जम्न शुरु भैसकेको थियो । परिवेशले हातमा लिएको एक वोतल वाइन स्मृति भाउजुको हातमा राखिदिंदै भन्यो, "अवेर त भइएन नि भाउजु ?"
"अलिअलि अवेर भैहाल्यो नि, यसको क्षतिपूर्ति अलि अवेर वसेर चुक्ता गर्नुपर्छ ।" स्मृति भाउजुले हाँस्दै भनिन् । कोही तलमाथि गर्दै घर निरिक्षण गर्दै थिए । कोही हातमा गिलास खेलाउँदै पिउनुको आनन्दमा झुम्दै थिए ।
परिवेश पनि हातमा ह्विस्कीको गिलास लिएर चुस्की लाउँदै यताउता घरको भित्री भागहरु हेर्न थाल्यो । सुगम घर हेर्न चाहनेलाई तल माथि, भित्र वाहिर गर्दै थियो र घरको कहानी पनि वताउँदै थियो, घर सानै छ, हामीलाई पुग्ने छ । कसैले भन्यो," घर राम्रो समयमा किन्नु भो । हेर्नोस, आफू त भाउ अकासिएको वेलामा परियो, निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।"
सुगमले भन्यो, हेर्नोस, यो सव अर्थतन्त्रको कुरा हो । भोली यो अर्थतन्त्र अझै ओरालो पनि त लाग्न सक्छ, कस्ले भन्न सक्छ, जाँदैन भनेर ।
अर्कोले भन्यो, एपार्टमेण्टको भाडा भन्दा त मोरगेज कमै होला नि ?
त्यो त कम छ । उसले भन्यो ।
त्यसो भए तपाईं नाफामै हुनुहुन्छ । अर्कोले वतायो ।
वल्ल सुगम र परिवेश आमने सामने भए । दुवैले हात मिलाए । गला पनि मिलाए ।
सुगमले भन्यो, ढिलो गर्नु भो नि आउन ।
धेरै ढिलो त होइन । वास्तवमा हिडौं हिडौं भन्दा भन्दै ढिलो भयो । परिवेशले भन्यो ।
लौ गिलास मात्र लिएर भएन नि , स्न्याक्स पनि लिनु पर्यो, ल म ल्याइदिन्छु । यति भनेर सुगम उसलाई स्न्याक्स लिन गयो ।
परिवेशलाई असजिलो लागिरहेको थियो । उसले घर किन्दा उ निकै फुर्किएको थियो र फूर्ति लाउँदै थियो । तर सुगम विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत भइरहेको थियो ।
वास्तवमा परिस्थितिले नराम्रोसँग लात हानेको थियो । उ र उजस्तै थुप्रैलाई लात हानेको थियो । अझ भनौं टाठा वाठा भएर हतारहतार घर किन्नेहरु सवै थलिएका थिए र सोझासाझाहरुको दिन फिरेको थियो ।
वासिनी थुप्रैसँग हाई हल्लो गर्दै कुराकानीमा व्यस्त थिई । परिवेश भने एउटा कुनामा वसेर एकोहोरो ह्विस्की पिएर आफैमा हराइरहेको थियो । अनि तपाईंको रियाल्टर चाहीं को नि ? कसैले सोध्यो । रितेश । रितेश शर्मा । उसले जवाफ दियो ।
त्यो गुनिलो भाई अलि ढिलो आउँछु भनेको छ । स्मृति भाउजुले भनिन् ।
रितेश । त्यो दुष्ट मनुष्य । परिवेशले त्यसलाई आमाचकारी गाली दियो, मनमनै ।
त्यो गुनिलो भाई आउँछ त ? कति भो नभेटेको । परिवेशले भन्यो ।
न्यूयोर्क गएका रहेछन्, वाल्टिमोर आइपुगें भनेको आधा घण्टा भयो, अव एकाध घण्टामा आई पुग्छन् । यसपल्ट स्मृति भाउजु वोलिन् । परिवेश अचानक अट्टहास गरेर हाँस्न थाल्यो । वातावरणमा एक्कासी सन्नाटा छायो । सव चूप लागे । हतारिंदै वासिनी परिवेश छेउ पुगी, के भो ? उसले सोधी ।
लौ के हुनु ? मलाई मज्जाले हाँस्न मन लाग्यो । रक्सी खाएको भएर, ठूलो आवाज भयो होला, त्यत्ति हो । परिवेशले भन्यो ।
स्थिति अव सामान्य भैसकेको थियो , क्षणभरमै । कतिले आफूलाई रक्सी लागेको भएर कानले त्यस्तो ठूलो आवाज सुनेको होला पनि भन्ठाने ।
"अव खाना खाउँ ।" वासिनीले परिवेशको कानमा भनी ।
"अव एक पेग लिन्छु, लास्ट पेग । अनि जाने ।" परिवेशले भन्यो ।
अनि उठेर गयो अनि एक पेग ह्विस्की लिएर फर्कियो ।
पार्टी खाएर मानिसहरु धमाधम विदा हुन थालेका थिए भने केही युवा युवती मीठा मिठा गीतमा झुम्दै कुम हल्लाउन थालेका थिए । यो अव नाच्ने वेला भएको संकेत थियो ।
वासिनीले अघिनै खाना लिइसकेकी थिई । परिवेशले अहिले लियो र कुनामा वसेर खान थाल्यो ।
सुगमले परिवेशको छेउमा गएर भन्यो, ढुक्कसँग खानुहोस् । अव गएर सुत्ने नै त हो ।
हो त्यो त हो । परिवेशले जवाफ दियो ।
सुगम यताउता गर्न थाल्यो केहीवेर र उद्घोषणा गर्यो, अव डिजे शुरु हुन्छ । सवैले ताली वजाए र गीत शुरु भो । नाच शुरु भो । अव आगन्तुकहरु कोही आइरहेका थिएनन् र जान खोजेकाहरु पनि रोकिएका थिए डिजेले गर्दा । डिजे नृत्य सकिएपछि सवैजसो थकित भए झैं खुइय गर्दै वसे । वासिनी पनि वसी । परिवेश वासिनी छेउ पुग्यो र भन्यो, "वासिनी जाउँ ।" "हुन्छ ।" यत्ति भनी वासिनीले ।
"हैन, केक नखाई कहाँ हुन्छ ? अव केक काट्ने वेला भैहाल्यो ।" सुगमले भन्यो ।
केही वेरमै जन्मदिनको झैं केक सजियो टेवुलमा र करतल ध्वनीकासाथ सुगम र स्मृतिले केक काटे अनि केकका टुक्राहरु सवैलाई वाँडियो ।
परिवेशलाई राम्रैसँग लागिसकेको थियो । उसले यौटा सानो टुक्रा केक मुखमा हाल्यो प्लेट कुनामा कतै राख्यो अनि वासिनी छेउ पुगेर भन्यो, वासिनी , अव जाउँ ।
परिवेशले जुत्ता लगायो । वासिनीले पनि लगाई । सुगम र स्मृति ढोकासम्म पुर्याउन आए । वासिनीले परिवेशको यौटा हात समातेकी थिई । स्मृतिले सुगमको हात समातेकी थिई । परिवेश र सुगमले विदाइका हात मिलाए । हात मिलाउँदै परिवेशले भन्यो, त्यो "गुनिलो भाई त आएन नि हगी ?" सुगम र स्मृतिले मुखामुख गरे ।
परिवेशले हाँसेर भन्यो, अव उसको आउने कामै छैन किन आउँथ्यो ? अव उ कहिल्यै आउँदैन । यत्ति भनेर सुगमको हात छाडेर परिवेश गाडी पार्किंग गरेको ठाउँतिर लम्कियो ।